Another Excerpt from ATK’s Newly Published Book – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Another Excerpt from ATK’s Newly Published Book
ကနေ့ညနေ ကျွန်တော် ခရီးထွက်ရပါဦးမယ်။ ဆယ်ရက်ကြာမှာပါ။ အသွားတစ်ရက်၊ အပြန်တစ်ရက် အပိုဆောင်းရင် ပေါင်း ၁၂ ရက်တာ အင်တာနက်နဲ့ ကင်းဝေးရာ ရွာကလေးမှာ သွားနေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကွန်မန့်တွေ ဝေဖန်ချက်တွေကို အချိန်မဆိုင်း မော်ဒရိတ်လုပ်ပေးနိုင်၊ ပြန်ကြားနိုင်ခြင်း မရှိမှာကို နားလည် ခွင့်လွှတ်ပေးတော်မူကြစေလိုပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ မကြာသေးခင်က ထွက်ထားတဲ့ “မိန်းမသားတို့ သိမ်းထားဖို့”ထဲက နောက်တစ်ပုဒ်ကို စာမြည်းအဖြစ် တင်ဆက်လိုက်ရပြန်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဆရာ့ကို ကျွန်မအဖေကဲ့သို့ သဘောထား၍ တိုင်ပင်ပါရစေ ဆရာ။
သည်လိုပါ ဆရာ၊ ကျွန်မအိမ်က ကျွန်မကို သူတို့သဘောတူတဲ့သူနဲ့ မနှစ်က စီစဉ်ပါတယ်။ ကျွန်မဘဝမှာ ရည်းစားလည်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီလူကိုလည်း မနှစ်သက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ ဆွေမျိုးများက အတင်းစီစဉ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်မ သူနဲ့ စတွေ့တာပါ။ သူက ကျွန်မနဲ့ သိတာ ကြာပါပြီ။ ရည်းစားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သည်ကိစ္စ မတိုင်ခင်ကတည်းက သံယောဇဉ် ရှိကြပါတယ်။ သည်လိုနဲ့ပေါ့ ဆရာရယ်၊ သူနဲ့ ကျွန်မ ရည်ငံကြတယ်။ အိမ်က လုံးဝ သဘောမတူပါဘူး။ သူက ကျွန်မထက် တစ်နှစ်ကျော် ငယ်ပါတယ်။ အိမ်က ဟိုလူနဲ့ စီစဉ်ချိန်မှာ သူက တစ်မြို့တစ်ရွာမှာ သင်တန်း သွားတက်နေရတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်မ သူ့ဆီ အကြောင်းကြားတော့ သူက အချိန်ဆွဲထားဖို့ မှာတယ်။ ဒါပေမယ့် ကံဆိုးချင်တော့ သူက အဲဒီ့မြို့ကနေ နိုင်ငံခြား ပညာတော်သင် သွားဖို့ နောက်တစ်မြို့မှာ သင်တန်း ဆက်တက်ရဦးမယ်တဲ့။ သူ ပြန်လာလို့ မရတော့ဘူး။ ကျွန်မအိမ်ကလည်း လုံးဝ အလွတ်မပေးဘူး။ သူ့ဆီက ဖုန်းဆိုရင် ပေးမကိုင်ဘူး။ ကျွန်မနဲ့သူ မနည်း ဆက်သွယ်ရတာပါ။ အပြင်မှာ ဖုန်းအဆက် အသွယ်ရတဲ့ တစ်ရက်မှာ သူက သူရှိရာကို လိုက်ခဲ့ဖို့ မှာတယ်။ အိမ်ကလည်း ဇွတ်စီစဉ်နေပြီ။ ဒါနဲ့ ကျွန်မ သူ့ဆီကို စွန့်စွန့်စားစား လိုက်သွားခဲ့တယ်။
မနက် နှစ်နာရီလောက်မှာ ထွက်ပြေးလာရတာပါ ဆရာရယ်။ ပိုက်ဆံဆိုလို့ လက်ထဲမှာ ကျပ် ၆၀ဝ၀ ပဲ ပါတယ်။ အဝတ် နှစ်စုံလောက်နဲ့ အလွတ် ပြေးခဲ့တာပါ။ သူ့ဘက်ကလည်း ဟိုလူ့ရန်က လွတ်အောင်သာ ခေါ်ရတာပါ၊ လက်ထပ်လို့ မရပါဘူး။ သူက နိုင်ငံတော်စရိတ်နဲ့ ပညာသင် သွားရမှာဆိုတော့ လူလွတ်ကိုမှ ရွေးလွှတ်တာပါ။ ကျွန်မ မရှက်တမ်း ပြောရရင် သူမှ သူပဲ ချစ်မိလို့သာ စွန့်စားရတာပါ ဆရာရယ်။
ကျွန်မရဲ့လက်ဝတ်လက်စားနဲ့ ဘဏ်စာအုပ်ထဲက ငွေနဲ့ သူရှိရာ မြို့မှာ သုံးလလောက် ကြာပါတယ်။ အိမ်က ရှာပေမယ့် အပုန်းကောင်းတော့ မမိခဲ့ပါဘူး။ မိမယ့် မိတော့လည်း အမေ ကိုယ်တိုင်နဲ့ တိုးတာပေါ့။
ကျွန်မလေ အရှက်၊ သိက္ခာနဲ့ မိသားစုဂုဏ်ကို မငဲ့ဘဲ သူ့ကိုပဲ ကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်။ သူ ဒုက္ခရောက်မှာစိုးလို့ သူ့ဘက်က လူကြီးတွေရှေ့မှာ ဘာမှ မပတ်သက်ဘူးလို့ကို ညာပြောခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့ဘက်က လူကြီးတွေထဲမှာ ကျွန်မတို့ အမျိုးထဲက တစ်ယောက်ပါတော့ ကျွန်မပြောတာ လက်မခံပါဘူး။ လူကြီးတွေက အပြင်မှာ လက်ထပ်ဖို့ စီစဉ်ပါတယ်။ နားလည်မှုနဲ့ ကျွန်မတို့ဘက်က ကျေနပ်အောင် လုပ်ပေးခိုင်းပါတယ်။ အမှန်ပြောရရင် သူနဲ့ ကျွန်မလည်း ညားနေပါပြီ ဆရာရယ်။
သည်လိုနဲ့ ကျွန်မနဲ့ သူနဲ့ တရားရုံးမှာ လက်ထပ်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီ့အချိန်က စပြီး မပြေလည်တာပါပဲ။ သူ့ကို ယူလို့ ကျွန်မအိမ်က အမေက လွဲရင် ဘယ်သူမှ မခေါ်တော့ပါဘူး။ ညီမ အပါအဝင်ပေါ့။ သူကလည်း ကျွန်မတို့ကပဲ သူ့ကို အနိုင်ကျင့်ပြီး လက်ထပ်ခိုင်းတယ်လို့ ပြောတယ်။
ကျွန်မ သူ့ကိုထောင်ဖမ်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မ မိသားစုကလည်း သဘောမကျပါဘူး။ အမှန်ပြောရရင် တစ်ရှက်က နှစ်ရှက်ဖြစ်မှာစိုးလို့သာ ပေးစားတာပါ။ ဒါကို သူက ခဏ ခဏ စကားနာထိုးတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ဆွေမျိုးတွေ ကို ကြောက်ပါတယ် ဘာညာနဲ့။ ကျွန်မ သည်းခံပါတယ်။
လက်မှတ်ထိုးတော့လည်း ကျွန်မတို့ပဲ တာဝန်ယူရတာပါ။ ဟိုမှာ နေတော့လည်း နေရေး၊ စားရေး ကျွန်မအိမ်က တာဝန်ယူတာပါပဲ။
သူက တစ်ဦးတည်းသောသားမို့လို့ သူ့မိဘကို ချက်ချင်း မပြောပါရစေနဲ့ တောင်းပန်လို့ ကျွန်မအိမ်ကို ကျွန်မ လိမ်ပေးခဲ့ရတာပါ။ သူ့လစာဆိုလည်း မထိပါဘူး။ သူ့လခ တစ်လ တစ်သောင်း သုံးထောင်ကျပ်ကနေ တစ်သိန်း နှစ်သောင်းအထိ တိုးသွားပေမယ့် ကျွန်မ တစ်ပြားမှ မခံစားခဲ့ပါဘူး။
ဧပြီမှာ သူ့မိဘဆီ ပြန်တော့ ကျွန်မကိုခေါ်သွားတယ်။ သူ့အိမ်က ကျွန်မတို့ လက်ထပ်ထားတာ မသိတော့ ကျွန်မရှေ့မှာ အချိုသတ်ပြီး ကွယ်ရာမှာ သဘောမတူကြောင်း သူတို့သားကို ပြောပါတယ်။ ကျွန်မကို သဘော မတူရအောင် ကျွန်မ အဖေက အရာရှိပါ၊ အမေက ဆရာဝန်ပါ၊ ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်လည်း ပညာတတ်ပါပဲ။ ကျွန်မတို့ ဆွေမျိုး၊ ငွေကြေးအင်အားအရ သူတို့ထက်တောင် သာပါတယ်။
အပြစ်ရှာပုံက ဆရာရယ်၊ အသက်တစ်နှစ်ကြီးလို့တဲ့။ သူ့အမေကတော့ ဝတ္ထုတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို ရောဂါတက်ပြတာပေါ့ ဆရာ။ သူ့မှာ ဘာမှ ပြောလောက်အောင် မရှိပါဘူးဆရာ။ ကိုယ်ပိုင်အိမ်တောင် မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ သူ့ကိုချစ်လို့ ဘာကိုမှ မမက်မောဘဲ သူ့နောက်လိုက်ခဲ့တာပါ။ သည်လောက် ဒုက္ခခံခဲ့တာပါ။ တစ်မျိုးလုံးကို အာခံခဲ့ရတာပါ။ ကျွန်မအိမ်က သူ့အိမ် က သဘောမတူတာသိရင် ပြဿနာ ပိုတက်မှာစိုးလို့ ဖုံးထားခဲ့ပါတယ်။
သည်ကြားထဲ ကျွန်မမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိလာတော့လည်း ဖျက်ချခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန် ဖျက်ချပြီးတဲ့နောက် ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရ ကျွန်မ အိမ်ပြန်ခဲ့ရတယ်။ သူကတော့ ဖုန်းဆက်တိုင်း အမျိုးတွေကြောင့် လက်ထပ်ရတာ၊ မကျေနပ်ဘူး ပြောပါတယ်။ ကျွန်မမှာ ယောကfျားနဲ့ဆွေမျိုးကြားမှာ စိတ်ဆင်းရဲရတယ်။ သူ သွားခါနီးမှာ ပိုဆိုးလာတယ်။ ကျွန်မနဲ့ သဘောမတူလို့ သူ့မိဘက တခြားလူနဲ့ စီစဉ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ ကျွန်မကို မေးတယ်။
အဲ့ဒါ သူ ကျွန်မကိုချစ်ရင် မေးရမယ့်မေးခွန်းကို မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်မ ထင်တယ်။ သူ့အိမ်ကို နားလည်အောင် ကျွန်မတို့ကြိုးစားရမှာပဲ။ ကျွန်မတောင် အခြေအနေဆိုးကြီးထဲက မိန်းမသားတန်မဲ့ စွန့်စားခဲ့ရသေးတာ သူစွန့်စားသင့်တယ်လို့ ကျွန်မ ပြောတော့ သူနဲ့ ရန်ဖြစ်ရတယ်။
အမေက အဆင်မပြေတာသိလို့ သူနဲ့ စကားပြောတော့ ကျွန်မကို သူ ချစ်လို့ ယူတာမဟုတ်ဘူး၊ အစကတည်းက လက်ထပ်ဖို့ မရည်ရွယ်ဘူးလို့ အမေ့ကို သူပြောတယ်။ ကျွန်မလေ ရူးသွားသလိုပဲ။
အမေက သူ့ကို ခွင့်မလွှတ်ဘူး။ တကယ်က သူ့ကို အရေးယူလို့ ရတယ်။ နောက်ကြောင်း မရှင်းရင် လုပ်သက်လည်း အလျှော့ခံရမယ်၊ ပညာသင်လည်း မလွှတ်ဘူး။ လူကြီးတွေက နားလည်မှုနဲ့ ကျွန်မတို့ကို လုပ်ပေးထားတာ၊ ဒါကို သူလည်း သိတယ်။ ကျွန်မလေ အမေ့ကို ခြေသလုံး ဖက်မတတ် တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကို ဒုက္ခ မပေးဖို့။ သူ အခု နိုင်ငံခြားပညာသင် သွားပါပြီ။
အခု သူ့ အနေအထားက သူက စပြီး လမ်းမခွဲဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့အိမ်က စီစဉ်ရင်တော့ သူ မတတ်နိုင်ဘူး။ သဘောက ကျွန်မက စပြီး ကွာရှင်းပေးစေချင်တဲ့သဘော ပြောတယ်။ ခုချိန်မှာ သူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ စာပဲ ရှိတယ်။ မစဉ်းစားချင်ဘူးတဲ့။
ကျွန်မ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ။ အခုဆိုရင် ကျွန်မမှာ ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ပါ။ ရက်ရက်စက်စက် လူမဆန်စွာ ဆုံးဖြတ်ခံရတဲ့ ကလေးလေးပေါ့။ ကျွန်မ ထပ် မရက်စက်ရက်ဘူး။ သူလည်း သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာမှ မပြောဘူး။ တာဝန်ယူဖို့ နေနေသာသာ နေကောင်းရဲ့လားတောင် မေးဖော်မရဘူး။ ကျွန်မ ဘာလုပ်ရမှာလဲ။ အိမ်ကလည်း နင့်ထိုက်နဲ့ နင့်ကံဆိုပြီး ပစ်ထားတယ်။ လိုအပ်တဲ့ ဆေးဝါး၊ ငွေကြေးက လွဲရင် ဆေးခန်းတောင် လိုက်မပေးဘူး။
ကျွန်မ သူ့ကို ချစ်တယ်။ နာလည်း နာတယ်။ သူကတော့ ဒါတွေ မစဉ်းစားဘူး။
ဆရာရယ် ကျွန်မ အမျိုးကောင်းသမီးပါ။ သူက လွဲရင် တခြားယောကfျားနဲ့ မပတ်သက်ဖူးပါဘူး။ ဒါတွေကို သူ သိလျက်နဲ့၊ ကျွန်မ နားမလည်နိုင်တော့ဘူး ဆရာ။ မင်းတို့အင်အားနဲ့ ယောက်ျား မရှားပါဘူးတဲ့။ ကျွန်မ ဘာဆက်လုပ်ရမယ် မသိလို့ တိုင်ပင်တာပါ။ ကျွန်မမှာ ဘယ်သူ့မှ တိုင်ပင်စရာ မရှိဘူး။ မိဘကလည်း အပြစ်တင်၊ ယောက်ျားကလည်း အပြစ်တင် ကျွန်မ ဘယ်လို လုပ်ရမှာလဲ။သူ့ကို ကွာရှင်းပေးလိုက်ရမလား။ ဒါမှမဟုတ် မိဘတွေ စိတ်တိုင်းကျ အရေးယူလိုက်ရမလား။ မစဉ်းစားတတ်တော့ဘူး။
ကွာရှင်းပေးဖို့ကလည်း ကျွန်မ သူ့ကို ချစ်လို့ ကွာရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ သူ စိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မကို အိမ်က အမေပါ စွန့်ပစ်တော့ မှာပါ။ ကျွန်မမှာ ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့၊ နောက်ဆိုရင် ကလေးတစ်ဖက်နဲ့ ကျောင်းက တစ်ပိုင်းတစ်စ၊ ဝင်ငွေ မရှိတဲ့ဘဝနဲ့ ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့။ အထူးသဖြင့် ကလေးလေး ဒုက္ခရောက်မှာ၊ ကျွန်မ ကလေး ဖခင်မဲ့မှာ၊ မိသားစုအလယ် မျက်နှာငယ်ရမှာ၊ ချို့တဲ့ ဆင်းရဲမှာကို စိုးရိမ်တာပါ။ တစ်ကြိမ်တစ်ခါ ရက်စက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ကျွန်မ မိုက်ပြစ်ကြောင့် သူ့ဘဝလေး နာလန်မထူနိုင်ရင် ကျွန်မသေဖို့ပဲ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်မအတွက် မစဉ်းစားပါဘူး ဆရာရယ်။
ကိုယ့်ကို မခင်တွယ်တော့တဲ့နောက် ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်ပါစေ ထားခဲ့ရမှာပေါ့။ ကျွန်မ ကလေးအတွက်ပဲ စိုးရိမ်တယ်။ ကျွန်မခြေထောက်ပေါ် ကျွန်မ မရပ်နိုင်ခင်မှာ ကျွန်မကလေး လူ့လောကထဲကို မလိုချင်ဘဲ မွေးလာရတဲ့ ကလေးအဖြစ်နဲ့ မရောက်စေချင်ဘူး။ သူ့ကိုလည်း ဆွေမျိုးတွေ စိတ်တိုင်းကျ အရေးမယူချင်ပါဘူး ဆရာရယ်။ သူ ဒုက္ခရောက် ဘဝပျက်မှာလည်း မကြည့်ရက်ဘူး။ ကျွန်မ ဘာလုပ်ရမှာလဲ။ ကျွန်မ သေချင်တယ် ဆရာရယ်။ ကျွန်မသေမှ သည်ဒုက္ခ ကျွတ်မှာပါ။ ကလေးကြောင့်သာ မဟုတ်ရင် သေရဲပါတယ်။
ကျွန်မ အနေအထားနဲ့ တစ်ခုလပ်ဖြစ်ပါစေ နောက်အိမ်ထောင်ပြုလို့ ရပါတယ်။ သူ ပြောသလိုပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကလေးအတွက် ပထွေးဆိုတာ မရှိစေရဘူး။ သူက လွဲရင်လည်း ကျွန်မ ဘယ်သူ့ကိုမှ မချစ်ဘူး။ ကျွန်မအိမ်ကတော့ သူ့ကို အရေးယူမယ်။ ကျွန်မကို သူ့ထက်သာတာနဲ့ ပေးစားပြမယ်ပေါ့။ ကယ်ပါဦး ဆရာရယ်။ ကျွန်မ မဖြေရှင်းတတ်တော့ဘူး။ ကျွန်မလေ သူဒုက္ခရောက်မှာ၊ ကလေးဒုက္ခရောက်မှာ စိုးရိမ်တယ်။ သူ မကျေမနပ်နဲ့ ပေါင်းသင်းနေတာကိုလည်း မလိုချင်ဘူး။
အကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်ပါတယ် ဆရာရယ်။ မြွေမသေ တုတ်မကျိုး နည်းလမ်းမျိုး ရှိရင်ပေါ့။ ကျွန်မကတော့ ဘာကိုမှ မစဉ်းစားတတ်တော့ဘူး။ ဆရာ သည်စာကို အမြန်ဆုံးပြန်ပေးပါဆရာ။ ဘာလို့လဲဆိုရင် ကျွန်မ မွေးဖို့ရက်က လပိုင်းပဲ လိုတော့ အိမ်က အမေ့လက်ထဲ စာရောက်မှာ စိုးလို့ပါ။ သူနဲ့ ကျွန်မ ကြားမှာ ဆရာ ဝင်ပြီး ညှိနှိုင်းပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်မဘက်က တတ်နိုင်သမျှ အလျှော့ပေးမှာပါ။
ဒါမှမဟုတ် သူ့အိမ်ကို အမှန်အတိုင်း အသိပေးရမလား။ ကျွန်မ ဘာမှ မလုပ်ရဲသေးဘူး ဆရာ၊ မှားသွားမှာစိုးတယ်။ ထပ်ပြီး အမှား မခံရဲတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ဆရာ့ကို အကူအညီတောင်းတာပါ။ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းပန်ပါတယ်။
ဆရာတို့ မိသားစု အဆင်ပြေ အေးချမ်းပါစေ။
သည်တစ်လ ပေးစာက စာဖတ်သူများ ဖတ်ခဲ့ရသည့်အတိုင်းပင် သိသိသာသာ ရှည်လျားသည်။ အသက်တစ်ရာ မနေရ၊ အမှုတစ်ရာ တွေ့ရသော အဖြစ်ပေတကားဟု မြည်တမ်းရမလိုလည်း ဖြစ်သည်။
ပြောစရာတစ်ခု ရှိပါသည်။ ကျွန်တော့်ထံ လာသော စာများစွာထဲမှ စာဖတ်သူ မိန်းမသားများ ဆင်ခြင် စဉ်းစားစရာ စာများကို ရွေးချယ်ကာ အမည်၊ နေရပ်များကို ဖြစ်စေ၊ သူတို့မှန်း သိသာလောက်သော အချက်အလက်များကိုဖြစ်စေ လှီးလွှဲ ထိန်ချန်ကာ အရင်းအတိုင်း ပြန်လည်ကူးယူ ဖော်ပြလျက်သည် ကဏ္ဍကို တင်ဆက်နေခြင်း ဖြစ်မှန်း စာဖတ်သူလူကြီးမင်းများ အားလုံး သတိထားမိပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ယခု တစ်ပတ်တွင်မူ ကျွန်တော့်မှာ တခြားအလုပ်တွေ ပိနေသဖြင့် အိုင်ဒီယာက စာမူတောင်းချိန်မှာပင် ထိုဘက်သို့ မလှည့်နိုင်သေးပါ။ သို့ဖြစ်သဖြင့် မူရင်းစာအား ကူးယူသော အလုပ်အား ကျွန်တော့်အိမ်သူကို ခိုင်းလိုက်မိပါသည်။
ကျွန်တော့်အိမ်သူသည် ထိုစာကို ကူးယူပြီး ဒေါသအမျက် ချောင်းချောင်းထွက် နေသည်။ “သည်လို မိန်းမတွေကြောင့် ရှင်တို့လို ယောက်ျားတွေ စားသာနေတာ၊ ထင်တိုင်းကျဲနေတာ”ဟု ရေရွတ်သည်။ ကျွန်တော်ပါ စက်ကွင်းမလွတ် ဖြစ်သွားရသည်။
ကျွန်တော့်အိမ်သူ ပြောတာလည်း အပြည့်အဝမှန်ပါသည်။ စာဖတ်သူများ သိထားပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း ကျွန်တော်သည်လည်း အရွယ်ရှိစဉ်တုန်းက ကျွန်တော့်နည်း ကျွန်တော့်ဟန်နှင့် လှည့်ပတ်ပြီး ဇယားတွေ ရှုပ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ထိုသို့ အလွယ်တကူ ဇယားရှုပ်နိုင်သည်မှာ ကျွန်တော့်အိမ်သူ ပြောသည့် “သည်လို မိန်းမတွေ”၏ သဘောကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်လည်း အမှန်ပင်။
အဓိကကတော့ အချစ်ကို ကိုးကွယ်တတ်ကြသော သူတို့၏ သဘာဝကြီးကိုကပင် အရိုးခံ မိန်းမသားတွေကို ဒုက္ခများနေစေခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ယောက်ျားတွေကို မိမိနှင့် နှိုင်းကာ မိမိလိုပဲ ရိုးရိုး ချစ်လိမ့်မည်ဟု ယုံမှတ်ခြင်းကား မိန်းမသားတို့၏ မဟာ့မဟာ အမှားပင် ဖြစ်လောက်ပါသည်။
တစ်ခါမက ကျွန်တော်ပြောဖူးပါသည်။ ကျွန်တော့်စာကို အခုမှ ဖတ်ဖြစ်သူများ၊ အရင်က ကျွန်တော် ပြောခဲ့သည်ကို လွတ်သွားသူများအတွက်ဟု ရည်ရွယ်ပြီးလည်းကောင်း၊ အခါခါ ထပ်ပြောလျှင် နားများပိုစွဲပြီး သတိများ ပိုကြီးလာကြတန် ကောင်းရဲ့ဟု တွေးထင်မိသောကြောင့်လည်းကောင်း နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ပြောခွင့် ပြုတော်မူကြစေလိုပါသည်။ “သည်မယ်ဗျာ… ခင်ဗျားနဲ့ ခဏလောက် ကိုယ်လက် နှီးနှောချင်လိုက်တာ”ဟု ပြောလျှင် ပါးချခံရမှာ သေချာသောကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ယောကျာ်းများသည် “ခင့်ကို သိပ်ချစ်တာပဲ”ဟု လွယ်လွယ် ပြောတတ်ကြောင်းကိုပါ ခင်ဗျား။
ယောက်ျားတို့၏ ချစ်တယ်ဆိုသော စကားကို မိမိ၏ စိတ်နှင့် နှိုင်းကာ အဘယ်မိန်းမသားကမျှ မယုံသင့်ပါချေ။ သူတော့ ငါ့ကို ကိုယ်လက်နှီးနှောခွင့်ရဖို့ စတင်အားထုတ်နေပြီဟု အမှန်အတိုင်း၊ အရင်းအတိုင်း မြင်သင့်ပါသည်။
တချို့က ယူဆမည်။ သည်လူကြီးက သူကိုယ်တိုင် အဲလိုပြောခဲ့တဲ့အတွက် ယောက်ျားထုတစ်ရပ်လုံးကို ဝါးလုံးရှည်နှင့် ရမ်းနေတာ နေမှာ၊ အရာတိုင်းမှာ ခြွင်းချက်တွေ ရှိတာပဲဟာ၊ ဘာညာပေါ့။ ဟုတ်ကဲ့… ယောကျာ်းစင်စစ် ဧကန်သာ ဖြစ်လျှင်၊ ဆိုလိုသည်မှာ မိန်းမလျာသာ မဟုတ်လျှင် အနှီယောက်ျား၏ အချစ်သည် လူပျိုပေါက်စ ၁၄-၅ နှစ်သား အရွယ်မှာသာ အညစ်အကြေး ကင်းစင်သယောင် ရှိတတ် ပါသည်။ ၁၆ နှစ်၊ ၁၇ နှစ် ကျော်ပြီဆိုသည်နှင့် အညစ်အကြေး ကင်းစင်သယောင် ချစ်စိတ်ကလေးက စတင်ပြီး လုံးပါး ပါးလာပါသည်။ အသက် ကြီးလာလေ၊ အတွေ့အကြုံ များလာလေ၊ ပိုပြီး လုံးပါးပါးလေနှင့် ဖြစ်တတ်ကြစမြဲပင်။
သို့မဟုတ်ပါကလည်း “အစတော့ ရိုးရိုး၊ နောက်တော့တစ်မျိုးတိုးလို့ ချစ် ပြန်ဆိုပဲ၊ ဆိုပဲ”ဟူသည့် ဆရာမြို့မငြိမ်း၏ သီချင်းထဲကလိုပင် မူလကတော့ ရိုးရိုးသားသားပင် ချစ်သည်ဟု ကျွန်တော်တို့ ယောက်ျားတွေဘက်က ထင်မိတတ်ကြပါသည်။ ကျွန်တော်လည်း ၁၆နှစ်သားလောက်က အဲလိုပင် ထင်မိခဲ့ဖူးသည်။ အမယ်… ကိုယ့်ရည်းစားပင် မထိရက်၊ မကိုင်ရက်၊ စိတ်နဲ့ပင် မပြစ်မှားရက်သလို ခင်ဗျ။
အဲ… ရည်းစားသက်လေးရ၊ တွဲသွား တွဲလာလေး လုပ်မိတဲ့အခါကျတော့ လက်ကလေး ကိုင်ရင်း၊ ပါးကလေး နမ်းရင်းက စိတ်တွေက ဖောက်ပြန်လာသည်၊ နောက်တော့ တစ်မျိုး တိုးချင်လာသည်။ ဟိုတစ်ဖက်သားက ခွင့်မပေးရင် မောင့်ကို မချစ်လို့၊ ဘာလို့ ညာလို့နှင့် အမျိုးစုံ ညုရတော့သည်။ အစတုန်းက ရိုးသားစွာ ချစ်ခဲ့ပေမင့် နောက်ပိုင်းကျတော့ ယောက်ျားတို့၏ သွေးသားထဲက မွေးရာပါ “ကြက်ဖစိတ်” ဝင်လာပါသည်။ (ရှိရှိသမျှ ကြက်မ အားလုံးနှင့် ပတ်သက်ကာ မိမိ၏ မျိုးဆက်ကို တတ်အားသမျှ ကြဲဖြန့်လိုမြဲ ယောက်ျားတို့၏ အခြေခံသဘောကို “ကြက်ဖစိတ်”ဟု တစ်နေရာတွင် ဖတ်ဖူးသဖြင့် ထိုသို့ သုံးနှုန်းလိုက်ရခြင်းပင် ဖြစ်လေသည် တမုံ့။)
အဲတော့ကာ မမများအနေဖြင့် ယောက်ျားတို့၏ အချစ်ဆိုသည်မှာ ကိုယ်လက် နှီးနှောရန် ရည်သန်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းကို အကြွင်းမဲ့ ယုံလိုက်ကြစေလိုပါသည်။ သည်ကိစ္စမှာ ခြွင်းချက် ရှိဦးတောင်မှ တစ်သောင်း တစ်ယောက်၊ တစ်သိန်း တစ်ယောက်၊ တစ်သန်း တစ်ယောက်လောက်ပင် ရှားသည့် ခြွင်းချက်ဟူသည်ကိုလည်း သတိချပ်ကြစေလိုပါသည်။
စိုးစိုးခိုင်(ဟု အမည်လွှဲထားသူ)ရဲ့ စာကို “ရှင် ဘယ်လို ပြန်လိုက်သလဲ”ဟု ကျွန်တော့် အိမ်သူက ကျွန်တော့်ကို မေးလေသည်။ ကျွန်တော် မမှတ်မိတော့ပါ။ ကျွန်တော့်မှာ တစ်လတစ်လ စာပြန်ရသော အရေအတွက်က မနည်းပါ။ မရှိဘူးဆိုလျှင် အစောင် ၅၀ လောက်တော့ ပျော့ပျော့လေး ရှိသည်။ တစ်စောင်ချင်းကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ပြန်သည်ဆိုလျှင် စာဖတ်သူများ ယုံပါ့မလားပင် မသိ။ တကယ် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ပြန်ပါသည်။
ကွန်ပျူတာနှင့်စာရေးခြင်းသည် လက်နှင့်ရေးတာထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုမို မြန်ဆန်သောကြောင့် မအားသည့်ကြားမှ ထိုသို့ ပြန်နိုင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ တချို့ကို လိုရင်း တိုရှင်း၊ တချို့ကို ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ပြန်ရသည်။ တစ်ခါတစ်ခါ မအားလပ်သဖြင့် မပြန်ဘဲထားသည့် စာပုံကြီး ရှိနေတတ်သည်။ ထိုအခါများတွင် ကျွန်တော့်မှာ လေးငါးရက် အချိန်ယူပြီး အီနေအောင် ပြန်ရသည်များပင် ရှိသည်။
ထို့ကြောင့် အခုနောက်ပိုင်းမှာ သတိထားသည်။ စာတိုက်သေတ္တာ ဖွင့်လာသည့် တစ်ပတ်စာအတွက်ကို အားအား မအားအား အချိန် သတ်သတ် ပေးကာ မဖြစ်မနေ ပြန်ရတော့သည်။ စာကြွေး မပိအောင် ဖြစ်သည်။
ပြန်ရတာ များလွန်းသဖြင့် သူ့ကို ဘယ်လို ပြန်ရေးခဲ့မှန်းကိုပင် မမှတ်မိတော့ချေ။ ထို့ကြောင့် ကွန်ပျူတာထဲတွင် ပြန်ရှာရာ ကျွန်တော့်ပြန်စာကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရလေသည်။
၂၀ဝ၆ ဒီဇင်ဘာ ၉
ခင်ဗျာ့စာက ခင်ဗျားတို့မြို့ရဲ့ စာတိုက်က အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်မှာ ထွက်ပြီး ရန်ကုန်စာတိုက်ကြီးကို ၂၇ရက်မှာ ရောက်လာကြောင်း စာအိတ်ပေါ်က တံဆိပ်တုံးတွေအရ သိရပါတယ်။ ကျွန်တော်က အခုမှ စာပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက် အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါရစေ။ သည်လပိုင်းအတွင်းမှာ ကျွန်တော့်မှာ ခေါင်းမဖော အားအောင် အလုပ်တွေ တအားပိနေလို့ပါပဲ။
ကိုင်း… ခင်ဗျားပြဿနာကို ကျွန်တော် တတ်နိုင်သမျှ ပြောကြည့်မယ်နော်။ ပြောရရင်တော့ အစကတည်းက ခင်ဗျား အမှားကြီး မှားခဲ့တာပဲ။ ဒါ အပြစ်တင် စကား မဟုတ်ပါဘူး။ သံဝေဂ ယူသင့်တဲ့ စကားပါ။ ရွှေမြင့်မိုရ် တစ်တောင်လုံးကို တုံးမှတ်လို့ ခုန်တဲ့ မိန်းမသားတွေဟာ သည်လောကမှာ ခင်ဗျား တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အတော် များများပါ။ ဒါ့ကြောင့် မိန်းမတွေများ နှာခေါင်း မပါရင် ဘာဖြစ်တယ်၊ ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာအထိ ပြောကြဆိုကြတော့တာပေါ့။
သေချာတာတစ်ခုကတော့ မိန်းမတွေရဲ့ အချစ်နဲ့ ယောက်ျားတွေရဲ့ အချစ်နဲ့က တခြားစီပါ။ ယောက်ျားတွေက သွေးသားကိစ္စလို့ တည့်တည့် ပြောရမှာ မကောင်းတတ်လို့ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ သကာလေး အုပ်ပြီး ပြောတာ၊ အဲဒါကို ယုံလွယ်တဲ့ မိန်းမတွေ ဒုက္ခ များကြရတာပါပဲ။
ခင်ဗျားအနေနဲ့ အလုပ်သင့်ဆုံးကတော့ သည်ကိစ္စကို မေ့ဖျောက်လိုက်ပါ။ ကိုယ့်ကို မလိုလားတဲ့သူကို တစ်သက်စာအတွက်လည်း ဘယ်လိုမှ ဆက်မစဉ်းစားစေချင်ဘူးဗျာ။ တစ်သက်လုံး စိတ်ဆင်းရဲရမှာထက်စာရင် ခဏတဖြုတ် အသည်းကွဲရတာက သက်သာပါတယ်။ သေသောသူ ကြာရင်မေ့ဆိုတဲ့အတိုင်း အသည်းကွဲလည်း တစ်သက်လုံးတော့ ခံစားရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ခိုက် တစ်ဒင်္ဂလေးများမှာသာ ခံစားရမှာပါ။
ကလေးအတွက်လည်း ပထွေးတို့၊ အဖေ မရှိတာတို့ကို ယမယ် ရှာနေတာဟာ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်က မပြတ်ချင်လို့ အကြောင်းပြနေတာပဲလို့ ကျွန်တော်ကတော့ ရက်ရက်စက်စက် စွပ်စွဲလိုက်ချင်တယ်။ ကလေးမှာ ဖအေ ရှိတယ်။ သူ့ဖအေက တာဝန်မယူတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်က စိတ်ပြတ်ရင် ကလေးမကလို့ သိကြားမင်းကြီးပဲ တားတား ပြတ်သွားမှာပါ။
မိဘတွေ စိတ်တိုင်းကျ သူ့ကို အရေးယူရေး မယူရေးကို ပြောရရင်တော့ ခင်ဗျားတစ်ကိုယ်ရေအတွက်ပဲ မစဉ်းစားစေချင်ဘူး။ သည်လို ယောက်ျားမျိုးတွေ နောင်ကြဉ်အောင်၊ ခင်ဗျားလို အချစ်ဆိုတဲ့ အလွဲကြီးကို ကိုးကွယ် ရူးသွပ်တတ်တဲ့ လာလတ္တံ့သော မိန်းမကောင်းလေးတွေအပေါ်မှာ သည်လို ယောက်ျားမျိုးတွေ အခွင့်ကောင်း မယူရဲအောင် စံပြအဖြစ်နဲ့ ခင်ဗျားက အနာခံပြီးတောင် အရေးယူ ပေးဖို့ ကောင်းသေးတယ်လို့ ကျွန်တော်က အကြံပေးလိုက်ချင်ပါသေးတယ်။
လောကမှာ မြွေမသေ တုတ်မကျိုး ဖြစ်ချင်လို့ မရဘူးဆိုတာ ခင်ဗျား သိထားသင့်ပါတယ်။ ရှဉ့်လျှောက်မယ်ဆိုရင် ပျားအုံ ရှိလို့ ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲ။ ပျားအုံရှိမယ် ဆိုရင်လည်း ရှဉ့်က ဖြတ်လျှောက်မှာကို မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါ သဘာဝတရားဗျ။ အဲဒါကိုမှ လွန်ဆန်ချင်ရင် မသေဆေးရှာတဲ့သူလို ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
အကောင်းဆုံး အကြံပေးရရင်တော့ သည်ကိစ္စကို ခင်ဗျာ့ခေါင်းထဲက လုံးလုံး ထုတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ကလေးကို သတ္တိရှိရှိနဲ့ မွေးပါ။ အဲဒီ့ကလေးကို လူလားမြောက်အောင် ခင်ဗျားတစ်ယောက်တည်းရဲ့ အစွမ်းအစ၊ အရည်အချင်းနဲ့ ဘယ်နည်းဘယ်ပုံ ကြိုးစား ပျိုးထောင်ယူမလဲဆိုတာကိုပဲ တစ်ချိန်လုံး ကြံစည်အားထုတ်နေပါ။
မွေးလာတဲ့ ကလေးက ယောက်ျားလေးဖြစ်နေရင် သူ့အဖေလို တာဝန်မဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်မလာအောင် ခင်ဗျားသာ ဖန်တီးယူနိုင်ပါတယ်၊ မိန်းကလေး ဖြစ်နေရင်လည်း မအေလို အချစ်ဆိုတဲ့ အလွဲကြီးကို ယုံမှားတတ်သူ ဖြစ်မသွားအောင် ခင်ဗျားသာ ပုံသွင်းနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အဖြေတွေက ခင်ဗျားအတွက် ကျေနပ်စရာ သိပ်ကောင်းမှာ မဟုတ်တာကို ကျွန်တော် နားလည်နိုင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားက သည်ရွှေအချစ်ကိုပဲ ဇန်းတင်ချင်တဲ့သူကိုး။ ကျွန်တော်ကတော့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့လားတော့ မသိဘူး၊ ယောက်ျားတွေရဲ့ အချစ်ကို တစ်စက်ကလေးမှ အထင်ကြီးလို့ မရသလို မိန်းမသားတွေရဲ့ အချစ်ဆိုတာကိုလည်း ဘယ်ယောက်ျားသားနဲ့မှ မထိုက်တန်လှတဲ့ အလွဲကြီးအဖြစ် မြင်မိပါတယ်။
ခင်ဗျားမီးဖွားချိန်လောက်မှ သည်စာ ရောက်မယ်ဆိုလည်း မတတ်နိုင်ဘူးဗျာ။ ကျွန်တော့်ကို ခွင့်လွှတ်ပါတော့။ သည်စာ ခင်ဗျာ့အမေလက်ထဲ ရောက်သွားတော့လည်း ခပ်ကောင်းကောင်းပဲ၊ ခင်ဗျားအမေဘက်က ပြောစရာ စကား ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရသွားတာပေါ့။
အမြင်မှန်သွား၊ တည့်သွားပါစေလို့ ကျွန်တော် ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ကွယ်လွန်သူ ဆရာငြိမ်းကျော် ရေးခဲ့ဖူးသော “အပြာရောင် သစ်ခွပွင့်ရဲ့ သမိုင်းအစ” ဝတ္ထုကို ပြန်သတိရနေမိပါသည်။ သည်လိုဇာတ်လမ်းမျိုးပင် ဖြစ်သည်။
ရှိသေးသည်။ သည်ဇာတ်လမ်းထဲက စိုးစိုးခိုင်၏ လူလို၊ မိန်းကလေးတွေဘက်က အနိုင်ကျင့်ပြီး လက်ထပ်ခိုင်းလို့ ယူရတာပါဟု ကြွေးကြော်ကာ နှမချင်း မစာတတ်သူများကိုလည်း ဘယ်လို ဩချရမှန်း မသိ။
ကျွန်တော် နုစဉ်အခါက ကျွန်တော့်အမေက ကြားဖူးနားဝနှင့် ထိုသို့ မိန်းမတွေဘက်က ထောင်ဖမ်းလိုက်မည်ကို လွှတ်စိုးရိမ်ရှာသည်။ ကျွန်တော် ရယ်မိသည်။ ထောင်ဖမ်းတာ ခံရဖို့ဆိုသည်မှာ ကိုယ့်ဘက်က အမှားရှိမှသာ ဖြစ်သည်။
နှစ်ယောက်တိတိကို ရပ်ကျော် ရွာကျော် တွဲပြီးသည့်အပြင် နှစ်ဖက်မိဘများ ပြောဆို ကြောင်လမ်းပြီးကာမှ ကျွန်တော်တစ်ယောက် မျက်နှာပြောင်တိုက်ကာ ရှောင်ထွက်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတွင် ယနေ့ထက်တိုင်လည်း ဘယ်လိုမှ မနေပါ။ လိပ်ပြာ သန့်ပါသည်။ အကြောင်းကား ထိုနှစ်ယောက်ကို ကျွန်တော် သမီးရည်းစားအဆင့်ထက် ပိုအောင် မနေခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
နေမိလို့ ထောင်ဖမ်းတာ ခံရလျှင် ထောင်ဖမ်းသူမှာက နောက်မှ အပြစ်ရှိတာ ဖြစ်သည်။ ကိုယ် မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ရှိတာက အရင်ဆုံးမို့ ကိုယ့်အပြစ်သာ ဖြစ်ပေသည်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ “မိန်းမသားတို့ သိမ်းထားဖို့”ကို ဖတ်နေကြမည့် တချို့သော ယောက်ျားများ သတိထားရန်ဖြစ်သည်။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်လှပါ ချေရဲ့ဟု ပြောကာ ကိုယ်လက်နှီးနှောလျှင် သိပ်ပြဿနာ မရှိပါ။ အဲ… အတည်တကျ လက်ထပ် ပေါင်းသင်းပါမည်ဟု ပြောပြီး ကိုယ်လက်နှီးနှောလို့ကတော့ဗျား… အဲဒါ ထောင်ကျနိုင်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုပါ ခင်ဗျား။ (ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော့်ဘက်က ဘယ်မိန်းမကိုမှ လက်ထပ်မည်ဟု မပြောခဲ့ပါ။ လက်မထပ်ဘူးဟု တစ်လျှောက်လုံး ကြွေးကြော်ခဲ့ပါသည်။ သည်ကြားထဲကမှ သူတို့က လိုက်လျောတော့လည်း ဟဲ… ဟဲ… ကျွန်တော်က ဖိုးကျိုင်းတုတ်ပေါ့ ခင်ဗျာ။)
မိန်းမသားများလည်း သတိထားစေချင်ပါသည်။ မိမိကိုယ်ခန္ဓာကို အရယူ လိုသော စိတ်ဖြင့် လက်ထပ်မည်ဟု တွင်တွင်ပြောသောစကားကို နှစ်ကိုယ်ကြား သာမကဘဲ သက်သေရှိအောင် အစောကြီးကတည်းက လုပ်ထားကြစေလိုပါသည်။ ကိုယ့်ဘက် သူ့ဘက် နှစ်ဖက် သက်သေ ရှိအောင် လုပ်ထားသင့်သည့်အပြင် လိုအပ်ပါက အသံလေးပါ ဖမ်းထား၊ တတ်နိုင်လျှင် ဗီဒီယိုလေးပါ ရိုက်ထားလိုက်ခြင်းအားဖြင့် အဆိုပါသူကောင့်သား၏ လက်ထပ်မည်ဟု ပြောသောစကားကို အစောကြီးကတည်းက အထောက်အထားနှင့် အရ ယူထားသင့်ပါသည်။
ပြောလက်စကို ပြန်သွားရလျှင် သူတို့ဘက်က ထောင်ပဲ ဖမ်းဖမ်း၊ အနိုင်ကျင့်လို့ပဲ ယူရယူရ၊ ကိုယ့်ဘက်က အနေမှားလို့ အခုလို ဖြစ်ရတာပါလား၊ ကိုယ့်ဘက်က မဆင်ခြင်မိလို့ ဖြစ်ရတာပါလားဟု စဉ်းစားသော ယောက်ျားများ သည်လောကမှာ ဘာ့ကြောင့် သည်လောက်ရှားသလဲဟု ကျွန်တော် မကြာခဏ စဉ်းစားဖူးပါသည်။
ပြောလိုက်လျှင်ကား ယောက်ျားတွေကပဲ မိန်းမတွေထက် ပိုသဘောထား ကြီးသလိုလို၊ ပိုပြီး ခမ်းနားနေသလိုလို၊ ဟိတ်တစ်လုံး ဟန်တစ်လုံးနှင့်။ ကိုယ့်ကျူးလွန်မှု၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်၏ လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် တာဝန်ယူဖို့ထက် တစ်ဖက်မိန်းမသားနှင့် အသိုင်းအဝိုင်းကြောင့် သူပဲ အနစ်နာခံခဲ့ရသလိုလို၊ သူ အလို့ပဲ ခံခဲ့ရသလိုလို ပြောတတ်ကြသည်မှာလည်း ထိုသို့ သဘော ထားကြီးသယောင်၊ ခမ်းနားသယောင် ဟိတ်ထုတ် သန်လှသော အနှီယောက်ျားသားများသာပင်။
ကျွန်တော်မည်သော၊ ရာနှုန်းပြည့် မခြောက်သော၊ ယောက်ျားစစ်စစ်ကြီးက ယောကျာ်းတွေ မကောင်းဘူးဟု အတိအလင်း ပြောနေပါသည်။ (ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီ့ကိစ္စမှာ တစ်စက်လေးမှ မကောင်းပါခင်ဗျား။) သည်တော့ မမများဘက်က သတိကို ကြီးကြီးရော၊ သေးသေးရော၊ ရွယ်ရွယ် လတ်လတ်ပါ ထားလျက် အမြဲမပြတ် ဆင်ခြင်ဖို့သာ လိုအပ်သည်ဟု မှာပါရစေ။
ယောက်ျားတို့၏ အချစ်ကို ဟိုသင်းစား ပြောတောင် မယုံပါနှင့်။ ကျွန်တော်တို့ ယောက်ျားတွေ ဟိုစိတ် မွှန်နေပါက ဟိုသင်း စားဖို့ ဝန်မလေးဟုသာ မှတ်ယူကြစေလိုပါသည်ခင်ဗျား။
Author lettwebawPosted on 30 January 2010 17 February 2010 Categories About Men, Excerpts, Reproduction
9 thoughts on “Another Excerpt from ATK’s Newly Published Book”
ဒါမျိုးတော့ မြန်မြန်ကွာလိုက်တာက ကိုယ့်ဘဝပိုသာယာပါတယ်။ ကိုယ်ဘက်က လော်လီတာမှ မဟုတ်တာ ဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှ ဂရုစိုက်နေစရာ မလိုဘူး.. သိမ်ငယ်နေစရာလည်း မလိုဘူး ။ မှတ်သားလောက်အောင် အရေးယူတာလည်း လုပ်သင့်တဲ့ အလုပ်ပဲ..။
30 January 2010 at 4:14 am
30 January 2010 at 5:59 am
Yeah….I totally agree with you. The girl should have more “boy friends” or at least “friend boys”. Hope, what ever she decided to do she is happy though.
ယောက်ျားတွေကို မယုံတာကတော့ အစကတည်းကပါဘဲ။ သူတို့ကို ပိုပြီးတော့မတွက်သလို လျှော့ပြီးလည်းမတွက်ပါဘူး။ အခုခေတ်မှာ ပိုဆိုးလာကြတယ်ထင်ပါတယ်။ အတ္တတွေသိပ်များနေတာကိုး။ လူမှုရေးရှုပ်ထွေးမှုတွေလုပ်ဖို့ထက် တိုင်းပြည်အကျိုး၊ လူတွေအကျိုးအတွက် ဇောက်ချပြီးလုပ်နေတဲ့၊ လုပ်မဲ့ ယောက်ျားစစ်စစ်တွေ ပိုများလာဖို့က daydream တစ်ခုဘဲထင်ပါရဲ့ ….
ကြောက်စရာပါလား?? ဆရာရယ်.. ဒီပို့စ်အတွက် အထူးကျေးဇူးပါနော်.. .
Please don’t say too much. They are scard to get marriage. All will be single. To the contrary some men are suffered because of women. By right you should not point out “man loves woman becasue of sex”. I wouldn’t totally agree with your point. Sorry…
အခုလိုသိလိုက်ရလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်.. ဆရာပြောသလိုပဲ ယောက်ျားတွေထဲမှာ တာဝန်ယူရဲတဲ့ ယောက်ျားပီသတဲ့ စိတ်နဲ့ လူမျိုးတွေက ရှားပါတယ်။ မရှိဘူးတော့ မပြောလိုပါဘူး။ လုပ်ရဲရင် ခံရဲတဲ့ ယောက်ျားတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အခုစာကို ဖတ်လိုက်ရတော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ မိန်းကလေးတွေကလည်း အချစ်ဆိုတာကြီးကို ကိုးကွယ်လွန်းကျတော့လည်း အခုလိုဒုက္ခတွေနဲ့ ကြုံရတာပါပဲလေ။ ဆရာ့စာကို မိန်းကလေးတွေ ဖတ်မိအောင်လို့ ကျွန်မ facebook မှာ Link နဲ့တကွ တင်ထားမိပါတယ်။ တင်ပြီးမှ ခွင့်တောင်းသလို ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဆရာ စိတ်မဆိုး စေချင်ပါဘူးရှင်။ ဆရာခွင့်ပြုပေးမယ်ဆိုတာလည်း ကြိုပြီး ယုံကြည်နေလို့ပါ။
ဆရာအခုထက်ပိုပီး နည်းလမ်းမှန်တွေ ပြောပြနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် ရှင်။
4 May 2012 at 6:20 am
မိန်းကလေးတွေ ယောင်္ကျားလေးတွေကို ယုံလို့(ယုံကြည်သင့်လို့) ချစ်တာမဟုတ်ပါဘူး..ချစ်လွန်းလို့ ယုံမိသွားတာပါ…ကိုယ်ချင်းစာတယ် 😦
14 October 2016 at 5:58 pm
“သည်လို ယောက်ျားမျိုးတွေ နောင်ကြဉ်အောင်၊ ခင်ဗျားလို အချစ်ဆိုတဲ့ အလွဲကြီးကို ကိုးကွယ် ရူးသွပ်တတ်တဲ့ လာလတ္တံ့သော မိန်းမကောင်းလေးတွေအပေါ်မှာ သည်လို ယောက်ျားမျိုးတွေ အခွင့်ကောင်း မယူရဲအောင် စံပြအဖြစ်နဲ့ ခင်ဗျားက အနာခံပြီးတောင် အရေးယူ ပေးဖို့ ကောင်းသေးတယ်လို့ ကျွန်တော်က အကြံပေးလိုက်ချင်ပါသေး တယ်။” ကိုကြီးကျော်ရဲ့ ပြန်စာထဲက သဘောကျမိတဲ့စာသားပါ။ ဒီအကြောင်းအရာပါတဲ့ မိန်းမသားတို့ သိမ်းထားဖို့ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို ဆယ်ကျော်သက်သမီးအတွက် ဝယ်ပေးထားပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း တစ်အုပ်လုံးဖတ်မိပြီးကတည်းက ဒီယုတ်မာလှတဲ့ငနဲဟာ စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကြီး တစ်ခုထဲက စုန်းပြူးးအရာရှိတစ်ယောက်ဆိုတာရိပ်မိပါတယ်။ ကိုကြီးကျော်ကတော့ စာရေးသူရဲ့ကျင့်ဝတ်အရ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကဆိုတာတော့ မပြောဘူးပေါ့။ဒီလိုကောင်မျိုးတွေရှိလို့ အဖွဲ့အစည်းနာမည် ပျက်ရတာ။ နောင်ဘ၀မှာလဲ ဒီငနဲ ယောက်ျားစင်စစ်ဖြစ်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
Previous Previous post: Excerpts from ATK’s Newly Published Book
Next Next post: Lies and an Important Role of Parents